Qaar ka mid ah buugaagta hadda jira oo ay tahay in aynaan dhaafin | Ragga Stylish
Akhrisku waa mid ka mid ah raaxaysiga shaqsiyeed nolosha. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad safarto oo aad wax barato, jawaabo aad hesho oo aad su'aalo cusub weydiiso. Xaaladaha qaarkood, ka hel macnaha nolosha, in kasta oo buugga soo socda laga yaabo inuu mar kale lumo.
ka Buugaagta hadda jira waxay noo keenaan tacabur, qarsoodi, milicsiga, iyo waxyaabo kaloo badan. Akhrisku waa farshaxan.
1 Qaar ka mid ah buugaagta hadda jira ee maanta ninku akhrin lahaa
1.1 Naadiga Dagaal ee Chuck Palahniuk (1996)
1.2 Treinteenagers waxaa qoray Carlos García Miranda (2016)
1.3 Ninka badan ee orgasmic-ka, by Mantak Chia (2000)
1.4 Ciyaaryahanka, waxaa qoray Fyodor Dostoyevsky (1867)
1.5 Taariikhda Isbaanishka, waxaa qoray Pierre Vilar (1947)
1.6 Ciyaarta ugu halista badan, waxaa qoray Richard Connell (1924)
Qaar ka mid ah buugaagta hadda jira ee maanta ninku akhrin lahaa
Naadiga dagaalkaby Chuck Palahniuk (1996)
Caan ku ah qayb mahadsanid Filimka David Fincher, waxaa jilaya Brad Pitt iyo Edward Norton.
Shaqada doorka ninka casriga ah iyo isku filnaanshihiisa muuqda ayaa la isweydiinayaa. Ma jiro wax akhris aqbali kara, oo ay ku eedeeyeen qaybaha ugu muxaafidsan inay yihiin "fal-celin".
Da 'yarta by Carlos García Miranda (2016)
Miyuu ninka hadda jiraa leeyahay dhibaatada da'da? Malaha, muddo dheer, taasi waxay u ahayd dood gudaha dad badan. Mid kale oo ka mid ah buugaagta muhiimka ah ee hadda jira.
Kuwaas ma rabto inaad joojiso baashaalka ama ku soo biirida xaalada taagan, iyada oo aan tan laga dheehanayn xaalad aan qaan gaadh ahayn.
Ninka orgasmic-ka badan, Waxaa qoray Mantak Chia (2000)
In ragga badankood ka fikiraan galmada markasta maahan wax lala yaabo. Inay ku nool yihiin tartan si looga sarreeyo kuwa kale ama naftooda waxqabadka sariirtaWaxaa laga yaabaa inay tahay qodob kale oo in yar ku dhiirran inay qiraan. Laakiin waa shay had iyo jeer banaanka yaala, oo dul wareegaya.
Ciyaaryahanka, waxaa qoray Fyodor Dostoyevsky (1867)
hay qaar badan oo ka mid ah akhriska suugaanta. Tani waa mid. Sawirka xumaanta uu ninku ku dhici karo, sababtuna tahay awood u la'aanta xakameynta himilooyinkiisa is-burburin ah.
Taariikhda Isbaanishka, waxaa qoray Pierre Vilar (1947)
Aragti uu taariikhyahan Faransiis ah u soo bandhigo qaranka Isbaanishka, laga soo bilaabo asalkiisii ​​iyo soo bixitaankii xukunkii Franco. Akhris wanaagsan, oo leh adkeyn taariikhi ah iyo ujeedo badan, erey aad loo isweydiinayo maalmahan.
Ciyaarta ugu halista badanby Richard Connell (1924)
Sheeko gaaban oo xoog badan. Ugaarsi, ugaarsadayaasha khibrada leh, waxay u adeegtaa marmarsiinyo in la isweydiiyo doorka ninku u leeyahay xayawaan sare, iyo waliba fikradaha sida garaadka iyo xoqidda
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » dhaqanka » Buugaagta hada ninka maanta
Lix jiinis jilicsan oo jilicsan ayaa xilligan dayrta ah